4.22 Games toogashada Best The World ee Android in aad ka ogaato d
Mobile9 waa meesha aad gabi ahaanba wax la xiriira in telefoonada smart ka heli kartaa. Haddii aad rabto in aad ringtones ama wallpapers, mawduucyada ama daadiyo, kulan ama videos, mobile9.com waa goobta aad u. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah kulamada soo xulay in ay ku caashaqa oo android ciyaari lahaa oo ay si fudud looga heli karaa mobile9.com iyo sidoo kale qaar ka mid ah website-yada kale ee kulan.
1. Tappy dusiyeen
Kulankaan ayaa waxaa lagu yaqaan inay tijaabiso samirka iyo waqtiga jawaabta isticmaalaha. Waxaa si gaar ah loogu talo galay ujeedadaas. Haddii aad u malaynaysid inaad tahay smart oo degdeg ah, markaas ha isku dayi kulankaan oo arag naftaada meesha aad taagan tahay.
2. Kulanka qabaa'ilka
Platform: 4.0.3 Android
Waxaad tahay hoggaamiyaha. Waxaad tihiin madaxdii ee tuulada. Waxaad si ay u dhisaan tuulada. Waa in aad hubiso in ay tahay barwaaqo. Waxaad u leeyihiin in ay dhistaan ​​oo ay kor u ciidan oo looga hortago in aad tuulo ka duulay.
3. Hill Racing fuulin
Kulan A free physics ku salaysan taas oo ah arrin la qabatimo. Newton Bill waa rakaabka ahaa ee uu gaariga iyo waxa uu leeyahay in kor jinsi iyo qabsadaan buuraha ugu sareeya. Baabuurta kala duwan ayaa lagu isticmaali karaa oo lacagihii waxaa lagu helay ka stunts. Gaadiidka ayaa sidoo kale la casriyeeyay karo.
Fallaadha gan, 4. Basketball
Kulankaan ayaa wuxuu ku salaysan yahay mabaadii'da physics dhabta ah. Tirada kubadaha ku kooban oo sidaas daraaddeed ciyaaryahan u baahan yahay si taxaddar ah samaynta biqil. Jiid laynka dhibcaha ee shaashadda oo loogu habeeyo biqil xaq ah basketball.
5. Candy Saga burburi
Markaasay oo aan ogayn wixii ku saabsan kulankaan caanka ah. Ciyaar xiiso A sawiro macaan iyo dhadhan. Waa wax la qabatimo oo uu leeyahay boqolaal iyo boqolaal ka mid ah heerarka. Ciyaarta oo dhan wuxuu ku salaysan yahay kabacdi farahaaga ilaa, hoos, bidix ama midig.
6. Candy burburi Soda Saga
Kulankaan waa kuwa horumariyo Saga Candy burburi. Xitaa waa wax macaan, funny iyo qabatimo. Ku raaxayso qaar ka mid ah naca cusub, isku rabaani ah oo xoog soda guduudnaa.
7. 3D Racing Fast
Waayo aragnimada badhaadhaha mile quarter ah iyo caddeyn mudan in darawal ah. Naqshadeynta ee tayada sare oo ay weheliso ah kulan play qabsado waxa uu sameeyay ciyaarta sidaas oo caan ku dhex tacsida iyadoo in ka badan 1 milyan oo downloads.
8. Game of Age War-Fire
Waxaa sidoo kale la xiriira dagaal. Waxaad heli doontaa in ay dhisto ciidan aad u gaar ah.
9. Difaaca Command
Meeraha ayaa la jecel yahay ayaa lagu soo duulay oo ay shisheeyaha iyo naxariis la'aan waxa ay leedahay si ay u badbaadaan. Kaliya waxaad badbaadin kartaa. Ka hor Taga oo faano.
Waxay asal ahaan 2 1 waa sida ciyaar iyo sidoo kale xoogaa yar oo farshaxanka. Kulanka ayaa sida oo si qurux badan gurato in ay ka kooban tahay oo keliya nuurka iyo gudcurka iyo waxa ay u muuqataa stunningly qurux badan.
> Resource > Emulator > Top 10 Recomended Android Games on Mobile9